जान्नुहोस ! बलिउडका यी कलाकार र क्रिकेटरबीचको सम्बन्ध (फोटो फिचर) – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodजान्नुहोस ! बलिउडका यी कलाकार र क्रिकेटरबीचको सम्बन्ध (फोटो फिचर)
बलिउड अनि क्रिकेट भारतमा मात्र नभए विश्वकै चर्चित क्षेत्र अन्तरगत पर्द्छ । बलिउडमा धेरै यस्ता कलाकारहरु रहेका छन् । जसको सम्बन्ध बलिउड उधोगमा मात्र नभए क्रिकेट सम्म पनि रहेको छ । अर्थात आज हामि तपाईहरुलाई बलिउडका केहि यस्ता हस्तीहरुको बारेमा बताउन गईरहेका जसको सम्बन्ध बलिउड क्षेत्र संग मात्र नभए क्रिकेट संग पनि रहेको छ ।
जानुहोस ! बलिउडका यी व्यक्तित्वहरुको बारेमा जसले भारतीय क्रिकेटर संग पनि निकै राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन् । (फोटो फिचर)
१. निधि अग्रवाल र भारतीय क्रिकेटर के एल राहुल
बलिउड एक्टर्स निधि अग्रवाल र क्रिकेटर के एल राहुनले पनि केहि समय पहिला देखि एक अर्कालाई डेट गरिरहेका छन् । केहि दिन अगाडी एउटा टिभी च्यानलबाट प्रसारण भएको एक कार्यक्रम मार्फत राहुलले यसको खुलासा गरेका थिए ।
२. परिनिति चोपडा र हार्दिक पाण्डे
बलिउडकी अर्की चर्चित एक्टर्स हुन् परिनिती । भने उनि संग डेट गर्ने व्यक्ति हुन् भारतीय चर्चित क्रिकेटर हार्दिक पाण्डे । परिनितीले केहि दिन पहिला एउटा कार्यक्रममा बोल्दै यी दुई बीचको सम्बन्धको बारेमा खुलासा गरेकी थिन ।